Knowledge Archives - Page 51 of 62 - Khitamyin
ကပ်ရောဂါနှင့် မကောင်းဆိုးရွားတို့၏ရန်မှ ကာကွယ်ပေးသော သံပုရာသီး အဆောင်
၁။သံပုရာသီး သုံးလုံးကို ဘုရားလှူပါ။ဆေးအဖြစ် လှူပါ၏။ ဤကုသိုလ်ကြောင့်မိသားစု အနာရောဂါကင်းဝေးပါစေ။ကပ်ရောဂါကင်းဝေးပါစေ။ မကောင်းဆိုးရွားတို့၏ရန်ဘေးကင်းဝေးပါစေ။ဆုတောင်းပါ။ နွမ်းသွားရင်၊ပုတ်သွားရင် စွန့်ယူပြီး စွန့်ပစ်ပါ။အသစ်ထပ်လှူနိုင်တယ်။ ၂။သံပုရာသီးတစ်လုံးကို အိမ်ရှေ့တံခါးအနီးတစ်နေရာရာမှာတင်ထားပါ။ သို့မဟုတ် အိတ်လေးနဲ့ချိတ်ဆွဲထားပါ။နောက်ဖေးတံခါးမှာတစ်လုံး ထားပါ။ဘေးရန်ကင်းပါစေ။ အနာရောဂါကင်းပါစေ။ကပ်ရောဂါကင်းပါစေ။မကောင်းဆိုးရွားတို့ရဲ့ရန်တွေကင်းပါစေ။…
” နေမကောင်းဖြစ်ရင် အမြန်ဆုံးနေကောင်းသက်သာစေတဲ့ ယတြာ ”
” နေမကောင်းရင် ဒီယတြာ လုပ်ပေးပါ” အမြန်ဆုံးနေကောင်းသက်သာစေတဲ့ ယတြာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကိုစောင့်သော ကလျာဏီနတ် ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ ၃၇ ခေါက်ကို မနက်တိုင်း ရွတ်ပြီး မေတ္တာပို့ပေးပါ။ အသက်ကို စောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်…
VPN သုံးရတာ နှေးနေရင်.. Data စားနေရင်.. ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ?
VPN သုံးရတာ နှေးနေရင်.. Data စားနေရင်.. ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ? ကန့်သတ်ချက်တွေ ကျော်လွှားပြီး Facebook သုံးဖို့အတွက် VPN တွေ အသုံးများလာတာနဲ့ အမျှ လိုင်းကျတာတွေ၊ Data…
အခုတလော ဟော့နေတဲ့ အရောင်ကုထုံးလိုမျိုး ဒီအချက်တွေကလဲ လိုက်နာလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်တွေပါပဲနော်😁😁 (ပုံတွေသေချာကြည့်..အဲလေ..စာတွေသေချာဖတ်ပါ😁 ) (1) ဂျင်းပြုပ်ရေတနေ့ ၂ကြိမ် သောက်ပါ။ (2) ရေနွေကြမ်း / ကော်ဖီပူများ…
ဆံတော်ရှင်ဖူး ကုသိုလ်ထူးကြောင့် ဘေးကင်းရန်ရှင်း အန္တရာယ်ကင်း၍ ကပ်ရောဂါဘေး ကင်းဝေးကြပါစေ
ဆံတော်ရှင်ဖူး ကုသိုလ်ထူးကြောင့် ဘေးကင်းရန်ရှင်း အန္တရာယ်ကင်း၍ ကပ်ရောဂါဘေး ကင်းဝေးကြပါစေ (၁၅.၇.၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားသော ဒေါ်ယဥ်မျိုးစု(မေမေမျိုး)အား ရည်စူး၍ မေမျိုးချစ်သော မိတ်ဆွေသားသမီးများကုသိုလ် မြတ်သောဒါန ကုသိုလ်ပြုဖုန်းဘေလ်များလှူဒါန်းကြပါသည် သာသနာတော်နှစ် ၂၅၆၅ခု…
ကပ်ဆိုက်နေချိန်မှာ သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက် မြတ်စွာဘုရားကြီးကို ဖူးဖြစ်အောင်ဖူးကြပါ
July 20, 2021Ko Khit0 Comments
သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက် မြတ်စွာဘုရားကြီး သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း (၈၀)ကျော် ရှိပါပြီ။ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းရှိ ရေဆန်ကျွန်းနက်တုံးကြီးအားဆယ်ယူ၍ ဆင်းတုတော်ကြီးထုလုပ်ပူဇော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းတုတော်ကြီးပူဇော်ထားသောနေရာသည်အင်မတန် အေးချမ်း တိတ်ဆိတ်ပြီး တရားရှုမှတ်သူများ လာရောက်၍ တရားအားထုတ်သော နေရာဖြစ်ပါတယ်…
ဘီလူ သဘက်လို ကြမ်းကြုတ် ရက်စက်မှု့ အတွက် နံပတ် 261 (နွေဦးက ထူးပါပြီ..)
ဘီလူ သဘက် လို ကြမ်းကြုတ် ရက်စက်မှု့ အတွက် နံပတ် 261 အမည်မသိ ၊ စစ်ကောင်စီမှာ မရှိတဲ့ လေယာဉ်တွေ ရန်ကုန်နဲ့ နေပြည်တောကောင်းကင်မှပပျံနေတဲ့အတွက် သုံးသပျပေးပါဦးလိုမိတျဆေေှ…
အမျိုးသားများအနေနှင့် တွင်းထဲကရေ ၇ခွက်သောက်ခြင်းဖြင့် ချစ်သူရည်းစားရသွားစေမည့် အံ့အားသင့်ဖွယ် ရေတွင်းကြီး
July 19, 2021Ko Khit0 Comments
လောကကြီးတွင် ထူးဆန်းပြီး အံ့အားသင့်စရာကောင်းသော အရာများနှင့် ပြည့်နှက်နေကာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ Cu Lao Chamကျွန်းရှိ နှစ်ပေါင်း၂၀၀ကြာထိ တည်ရှိနေသေးသော ၅မီတာအနက်ရှိ ရေတွင်းတစ်တွင်းသည် အလွန်ထူးခြားသောကြောင့် ခရီးသွားများဧ။်အာရုံကို ဆွဲဆောင်ထားသည်။…
ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရပြီးသူမအားတင်းဖြတ်ကျော်လာပုံကိုပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော်ကော်နီ
ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ တေးသံရှင် ကော်နီ က သူမကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို လူမူကွန်ယက်မှာ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ “ကိုဗစ်ပထမလှိုင်းဒုတိယလှိုင်းကို သွားသွားလာလာနဲ့ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် တံခါးပေါက်တောင်မရပ်ရတဲ့ကျွန်မအိမ်ထဲမှာနေရင်း နဲ့ဘဲ တတိလှိုင်းကို…
ကိုဗစ် ကိုတိုက်နိုင်ဖို့ ဒချိ ဖောင်းဒိုင်း များများ လုပ်ကြစို့
ကဲ..တက်ညီလက်ညီ တစ်ကမ္ဘာလုံးဖောင်းဒိုင်းကြပေတော့ ဒါ့ကြောင့်ကမ္ဘာကြီးက ၂၃ နှစ်ပိုင်း တစ်ပိုင်းများတိမ်းစောင်းနေတာလားလို့ဗျာ 😜😜 SiThuMaung ဖတ်သာကြည့်တော့ ….. ကိုဗစ် ကိုတိုက်နိုင်ဖို့ ဒချိ ဖောင်းဒိုင်း များများ လုပ်ကြစို့…